शरणार्थी यात्रा कागजात र यात्रा अधिकार | USAHello | USAHello
तपाईं शरणार्थी वा asylee छन्? तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर यात्रा गर्नुपर्छ? तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका फर्कन गर्न एक शरणार्थी यात्रा कागजात आवश्यक हुनेछ. सबैभन्दा शरणार्थी र asylees एक पासपोर्ट ठाउँमा यात्रा को लागि एक शरणार्थी यात्रा कागजात प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहिर यात्रा गर्न इच्छा गर्ने शरणार्थी वा आश्रय स्थिति संग एक व्यक्ति एक शरणार्थी यात्रा कागजात आवश्यक. यो कागजात बिना, तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका पुनः प्रवेश गर्न योग्य नहुन सक्छ र तपाईं थुनामा वा अध्यागमन अदालत मा राखिएको सकिएन.
यो शरणार्थी यात्रा कागजात एक पासपोर्ट जस्तो देखिन्छ र एक जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ. तर, शरणार्थी रूपमा, कृपया बुझ्न सम्म तपाईं एक अमेरिकी नागरिक, तपाईं आफ्नो स्थिति गुमाउन सक्छ किनभने अमेरिका बाहिर यात्रा गर्न केही जोखिम छ. तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहिर यात्रा गर्न एक धेरै राम्रो कारण हुन सक्छ. तर यो तपाईं संलग्न सम्भावित अध्यागमन चुनौतीहरू बारेमा थाहा महत्त्वपूर्ण छ.
म एक शरणार्थी यात्रा कागजात लागि कसरी लागू गर्न?
एक शरणार्थी यात्रा कागजात लागि लागू गर्न, तपाईं फाइल गर्न आवश्यक फारम म-131, यात्रा कागजात लागि आवेदन. फारम फाइल गर्न, कृपया ध्यान पढ्ने पूरा गर्न निर्देशन फारम म-131. कानुनी प्रकारका पूरा धेरै भ्रामक हुन सक्छ, पनि अमेरिकामा जन्म मान्छे को लागि. तपाईं कानुनी फारम पूरा गर्न आवश्यक छ भने, यसलाई आफ्नो resettlement एजेन्सीको मद्दत प्राप्त गर्न एक राम्रो विचार छ. तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ आधारमा, तपाईं फरक ठेगानामा फारम मेल हुनेछ. निश्चित सही ठेगानामा फारम मेल.
यो पैसा खर्च गर्छ एक यात्रा कागजात फाइल?
हो. आफ्नो उमेर आधारमा, तपाईं दुवै फारम र आफ्नो biometrics लागि शुल्क तिर्न सक्छ (फिंगरप्रिंटिंग र फोटो). तपाईं गर्न सक्षम हुन सक्छ एक शुल्क अधित्याग लागि लागू यदि तपाईं वित्तीय कठिनाइ देखाउन सक्छौं.
म संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्न पछि म एक शरणार्थी यात्रा कागजात लागि फाइल गर्न सक्छन् एक फारम म-131?
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका जानुअघि तपाईं एक शरणार्थी यात्रा कागजात लागि फारम म-131 फाइल गर्नुपर्छ. तपाईं एक शरणार्थी यात्रा कागजात लागि फाइल छैन भने अघि तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्न, तपाईं शरणार्थी आफ्नो स्थिति गुमाउनु वा अमेरिकी फिर्ता आउँदै कठिन समय छ सक्छ. के तपाईं भन्दा कम लागि संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिर भएको छ भने मात्र लागू हुन सक्छ 1 तपाईंको आवेदन मा खोल्दै को समयमा वर्ष. तर, तपाईं यो तपाईं दायर सक्थे आफ्नो फारम म-131 तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका बाँकी अघि स्पष्ट छ भने एक विदेशी कार्यालय तपाईंको आवेदन स्वीकार हुनेछ भनेर मान्छु सक्दैन.
म फाइल यदि फारम म-131 शरणार्थी यात्रा कागजात प्राप्त गर्न गर्दा म संयुक्त राज्य अमेरिका मा छु, फारम अझै बाँकी रहेको छ, जबकि यदि म संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्न USCIS फारम म-131 अस्वीकार गर्नेछ?
USCIS तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा हुँदा तपाईं फाइल फारम म-131 सिफारिस हुनत, के तपाईं आफ्नो biometrics पेश गरेका छन् भने एक अनुमोदन र एक शरणार्थी यात्रा कागजात को समस्या को लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा उपस्थित हुन आवश्यक छैन (तस्वीर, औंठाछापहरू).
म विगतका सतावट अनुभव वा भविष्यमा सतावट एक डर दावी जहाँ देश फिर्ता यात्रा गर्न सक्छन्?
केही विशिष्ट परिस्थितिमा, के तपाईं भागे देश फर्कन सक्नुहुन्छ. जस्तै, नजिकको परिवार सदस्य बिरामी छ वा मृत्यु भएको छ भने, तपाईं मूल आफ्नो देश फर्कन योग्य हुन सक्छ. तर यदि तपाईंले asylee वा शरणार्थी र तपाईंबाट सुरक्षा दावी ठाउँमा फिर्ती छन्, तपाईं आफ्नो आश्रय स्थिति गुमाउन सक्छ.
के तपाईं बायाँ देश फर्कन आवश्यक छ भने, हामी तपाईँ पहिला आफ्नो resettlement एजेन्सी वा एक वकील कुरा सुझाव.
यस शरणार्थी यात्रा कागजात र फारम म-131 बारेमा थप विवरण लागि, पढ्न वा यो डाउनलोड गर्न सक्छन् USCIS जानकारी. पनि कृपया थप पढ्नुहोस् शरणार्थी रूपमा आफ्नो अधिकार.